Putin oo ugu baaqay Ruushka inay tirada dadkooda badiyaan carruur badanna dhalaan dowladduna taakuleyn doonto
Mogadishu - 12:54:06
Wednesday January 15, 2020 - 22:00:35 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin oo maanta hadalka sanadlaha ah ee ku saabsan xaaladda dalkiisa u jeedinayay shacabkiisa, isla markaana si toos ah looga tebinayay telefishinka qaranka ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo badan.
Putin waxa uu ka hadlay dhanka saboolnimada haysata qaar ka mid ah muwaadiniinta Ruushka ee dhaqaalaha hooseeya uu soo galo, isagoo ballan qaaday in loo sameyn doono shaqo abuur, xirfad baris iyo in loo abuuro ganacsiyo yaryar.
Laakiin Putin waxa uu taabtay dhinac muhiim ah oo uu ku sheegay in ay tahay dhibaato weyn oo heysata Ruushka, taasoo ah dhanka taranka iyo carruur dhalidda oo ku yar dalka.
"Mas’uuliyadda ugu weyn ee na saaray waa inaan sare u qaadnaa tirada dadka oo aad u hooseysa, waxaana taasi ay nagu kallifaysaa in aan ku bixinno dhaqaale gaaraya 7.31 bilyan oo dollar sanadkan 2020" ayuu yiri Putin.
Qoysaska carruurta cusub ay ku soo kordhaan ayuu Putin lacag lagu siin doono oo ay dowladdu ka taageeri doonto dhanka hagaajinta noloshooda, dhisidda iskuullo cusub iyo goobo carruurta lagu xanaaneeyo.
2024-ka ayaa waxaa qiyaastu sheegaysaa in heerka dhalmada carruurta Ruushka ay gaari doonto 1.7 carruur ah halkii dumar.